Tavoahangy namboarina manokana
Tavoahangy kaomandy kely
Ahoana no hanavahana ny fitaratra misy firaka sy ny fitaratra tsy misy firaka?
Ny fampiasana maharitra ny solomaso misy firaka dia hampitombo ny fihangonan'ny firaka ao amin'ny ra. Rehefa tonga amin'ny ambaratonga iray izany dia hihena ny fitadidiana sy ny faharanitan-tsain'ny olona iray, ny fikorontanan'ny saina, ny nofy ratsy, ny tsy fahitan-tory ary ny olana hafa. Manimba kokoa ny ankizy ny fanapoizinana firaka ary...
Karazana solomaso champagne inona no misy?
Efa hatry ny ela dia toa misy fifandraisana ara-boajanahary eo amin'ny divay sy ny goblet, saingy ny namana mitandrina dia tsy maintsy mahita fa ny kaopy ampiasaina amin'ny divay mamiratra dia tena hafa. Inona avy ireo kaopy champagne mahazatra ary inona ny fampiasana azy ireo? 1. Saucer champagne vera Raha ny marina, hatramin'ny 1970 ...
Ny vera cocktail mahazatra 10
Cocktail dia tontolo feno loko. Feno famoronana ary tian’ny maro. Misy karazana cocktails tsy tambo isaina eto amin'izao tontolo izao, ary manana ny toetrany manokana koa ny kaopy entina hihazonana cocktails. Mandeha ao anaty trano fisotroana iray ianao, dia ho hitanao tokoa ny karazana vera divay rehetra eny amin'ny kaontinanta...
Ny dingana famokarana tavoahangy fitaratra sarintany
1. Famolavolana famolavolana sary 2. Manamboatra lasitra-mampiasa vy firaka miaraka amin'ny lasitra vita amin'ny chrome, araka ny sary voamarina mba hanaovana lasitra 3. Manomana fitaovana Ny tavoahangy dia vita amin'ny vera borosilicate avo, Voafantina ny haben'ny fitaratra borosilicate avo. fantsona sy ny loko mba hiomanana. 4.fabri...
"Divay tsara misy vera tsara" tianao ho fantatra ve ny fahasamihafana misy eo amin'ireo karazana vera divay ao amin'ny fivarotana? Mety hisy hiteny hoe “Tsy miraharaha aho, fa ny kapoaka ihany no tiako hisotroana rano” Tsy maninona! Saingy mbola te hilaza amin'ny rehetra fa mbola zava-dehibe ny misafidy ...
Ny dingan'ny fandokoana volamena amin'ny fitaratra
Hitanao fa maro ny solomaso misy rojom-bolamena na lamina eo amin'izy ireo, ary maro koa ny manontany tena hoe ahoana no nanaovana ilay molotra volamena manify eo amin'ny fitaratra. Noho izany, manaraka, dia homeko anao ny famaritana fohy ny fomba nandoko ny volamena teo amin'ny fitaratra. Raha ny marina, misy karazana hosodoko volamena roa: manual sy mec...
Momba ny tavoahangy fitaratra kristaly K9 ultra-fotsy
Hatramin'ny nahaterahan'ny vokatra fitaratra, izao tontolo izao dia nanenjika ny majika famirapiratana mazava sy mamirapiratra, tsy mitsahatra mikatsaka ny fandrosoana amin'ny siansa sy ny teknolojia ary ny fetran'ny fanodinana akora, ary miezaka ny manolotra ny traikefa faran'izay tsara amin'ny sary tsy misy dikany. .
Ny dingana decalling
Ny dingana decalling 1. Unboxing 1) Esory ny vokatra misy tsininy ary avereno any amin'ny departemanta famokarana, apetraka eo amin'ny pallet ny vokatra mahafeno fepetra ary alefa any amin'ny departemanta decal. 2) Raha misy sticker eo amin'ny fitaratra dia esory ary diovy ny lakaoly amin'ny sticker. 3) Ny vokatra tsy misy fepetra dia ...
Inona avy ireo fomba fanamboarana ny vera?
1. Ny fitaratra miforona amin'ny fitsofana, sy ny fitsofana fitaratra dia azo zaraina ho fomba roa: ny fitsofana mekanika sy ny fitsofana tanana. Ny antsoina hoe blow moulding dia ny fampiasana rivotra mifofofofo na ny vavan'ny tanana mitsoka mba hahatonga ny vera fitaratra ho endrika vokatra iray ao anaty lasitra. Ny fitsofana manual dia afaka b...
Dingan'ny famokarana fitaratra mitsoka vava
Ny solomaso vita amin'ny milina dia tsotra ny famokarana, mitsitsy fotoana ary mahomby, noho izany dia mihamitombo hatrany izy ireo. Fa ho an'ny sasany miendrika manokana sy sarotra ny famoahana endrika, ny sasany miloko glaze kaopy, Mouth mitsoka dia tsy azo soloina. Mianara bebe kokoa momba ny famokarana ...
Inona no karazana fitaovana ho an'ny fitaratra
1. Soda sokay vera Isan'andro vera, vilia baolina, sns rehetra vita amin'ny fitaovana ity, izay miavaka amin'ny hafanana kely tampoka fahasamihafana. Ohatra, raha misy rano mangotraka arotsaka ao anaty vera nalaina avy ao amin'ny vata fampangatsiahana, dia mety ho vaky izany. Ankoatra izay, tsy recomm...
Whisky vera mahazatra, firy no fantatrao?
1. Fikasihana farany amin'ny vato Avy amin'ny marika kanadiana, ny vato volkano eo amin'ny farany ambany amin'ny vera whisky volkanika dia miendrika. Ny baolina gilasy dia mangatsiaka miaraka amin'ny lasitra tafiditra ao. Rehefa misotro ny whisky dia ampio ny gilasy, kobano moramora ny vera, mihodinkodina mitovy ny gilasy, mangatsiatsiaka t...
Ny loko tavoahangy fitaratra